ယွန်းယွန်းနဲ့ ပက်သက်ပြီး ပြတ်သားစွာရေးသားလာတဲ့ အုပ်စိုးခန့် ရဲ့စာတစ်စောင် – XB Media & News
ယွန်းယွန်းနဲ့ ပက်သက်ပြီး ပြတ်သားစွာရေးသားလာတဲ့ အုပ်စိုးခန့် ရဲ့စာတစ်စောင်
ယွန်းယွန်းနဲ့ ပက်သက်ပြီး ပြတ်သားစွာရေးသားလာတဲ့ အုပ်စိုးခန့် ရဲ့စာတစ်စောင်
အနုပညာလမ်းကြောင်းပေါ်မှာ အောင်မြင်မှုအတန်အသင့်ရရှိနေပြီး နောက်ထပ်လည်း ခြေလှမ်းအသစ်တွေနဲ့ ကြိုးစားနေသူကတော့ အုပ်စိုးခန့်ပဲဖြစ်ပါတယ်နော်..အဆိုတော် အုပ်စိုးခန့်လို့ဆိုလိုက်တာနဲ့ ပရိတ်သတ်တွေရဲ့ ရင်ကို အသံချိုချို နှင့် တေးသီချင်းကောင်းများဖြင့်
ဆွဲဆောင်ထားတဲ့ တေးသံရှင်တစ်ဦးလို့ အသိအမှတ်ပြုထားကြတာဖြစ်ပါတယ်။ဒါ့အပြင် သူဟာ သူ့ရဲ့ ပျော်ပျော်နေတတ်ပြီး သူချစ်ခင် တန်ဖိုးထားရတဲ့မိသားစုဝင်တွေကို စနောက်တတ်တဲ့ အကျင့်တွေကြောင့် ပရိတ်သတ်တွေအနေနဲ့ ပိုပြီး သတိထားမိနေကြတာဖြစ်ပါ
တယ်။ အုပ်စိုးခန့်ကတော့ လက်ရှိမြန်မာနိုင်ငံမှာ ဖြစ်နေတဲ့ အခြေအနေတွေကြားထဲမှာလည်း ပြည်သူများနဲ့အတူ ရပ်တည်ခဲ့သူပဲ ဖြစ်ပါ တယ် နော်.. အုပ်စိုးခန့်က သူ့ရဲ့အနုပညာလှုပ်ရှားမှုတွေကိုလည်းပရိသတ်နဲ့အဆက်ပြတ်မသွားစေသူပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ အုပ်စိုးခန့်က ဖေ့
ဘုတ်စာမျက်နှာထက်မှာတော့ သူ့ရဲ့လှုပ်ရှားမှုတွေကို တင်လေ့မရှိတော့ဘဲ Instagram နဲ့ Tiktok မှာတော့ တင်ပေးလေ့ရှိပါတယ်နော်. အုပ်စိုးခန့်ကတော့ .ယွန်းယွန်းနဲ့လည်းချစ်သူတွေဖြစ်ခဲ့တယ်လို့လည်းသတင်းတွေ ထွက်ပေါ်လာခဲ့ပါသေးတယ်။ မနေ့ကတော့ယွန်းယွန်းနဲ့
စည်သူဝင်းတို့ရဲ့ နောက်ကွယ်ကဇာတ်လမ်းတွေထွက်ပေါ်လာခဲ့ပြီးနောက်တော့ အုပ်စိုးခန့်က သူ့ဘက်က စတင်ပြီးပြောလာခဲ့ပါသေးတယ်။ Fans Myay Ni Lan ပရိသတ်ကြီးလည်း အုပ်စိုးခန့်အတွက်အားပေးစကားလေး ရေးပေးခဲ့ကြပါအုံးနော်..
Surce: Oak Soe Khant
ယြန္းယြန္းနဲ႔ ပက္သက္ၿပီး ျပတ္သားစြာေရးသားလာတဲ့ အုပ္စိုးခန႔္ ရဲ႕စာတစ္ေစာင္
အႏုပညာလမ္းေၾကာင္းေပၚမွာ ေအာင္ျမင္မႈအတန္အသင့္ရရွိေနၿပီး ေနာက္ထပ္လည္း ေျခလွမ္းအသစ္ေတြ နဲ႔ ႀကိဳးစားေနသူကေတာ့ အုပ္စိုးခန႔္ပဲျဖစ္ပါတယ္ေနာ္..အဆိုေတာ္ အုပ္စိုးခန႔္လို႔ဆိုလိုက္တာနဲ႔ ပရိတ္သတ္ေတြရဲ႕ ရင္ကို အ သံခ်ိဳခ်ိဳ ႏွင့္ ေတးသီခ်င္းေကာင္းမ်ားျဖင့္
ဆြဲေဆာင္ထားတဲ့ ေတးသံရွင္တစ္ဦးလို႔ အသိအမွတ္ျပဳထားၾကတာျဖစ္ပါတယ္။ဒါ့အျပင္ သူဟာ သူ႔ရဲ႕ ေပ်ာ္ေပ်ာ္ေန တတ္ၿပီး သူခ်စ္ခင္ တန္ဖိုးထားရတဲ့မိသားစုဝင္ေတြကို စေနာက္တတ္တဲ့ အက်င့္ေတြေၾကာင့္ ပရိတ္သတ္ေတြအေနနဲ႔ ပိုၿပီး သတိထားမိေနၾကတာျဖစ္ပါ
တယ္။ အုပ္စိုးခန႔္ကေတာ့ လက္ရွိျမန္မာႏိုင္ငံမွာ ျဖစ္ေနတဲ့ အေျခအေနေတြၾကားထဲမွာလည္း ျပည္သူမ်ားနဲ႔အတူ ရပ္တည္ခဲ့သူပဲ ျဖစ္ပါ တယ္ ေနာ္.. အုပ္စိုးခန႔္က သူ႔ရဲ႕အႏုပညာလႈပ္ရွားမႈေတြကိုလည္းပရိသတ္နဲ႔အဆက္ျပတ္မသြားေစသူပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ အုပ္စိုးခန႔္က ေဖ့
ဘုတ္စာမ်က္ႏွာထက္မွာေတာ့ သူ႔ရဲ႕လႈပ္ရွားမႈေတြကို တင္ေလ့မရွိေတာ့ဘဲ Instagram နဲ႔ Tiktok မွာေတာ့ တင္ေ ပးေလ့ရွိပါတယ္ေနာ္. အုပ္စိုးခန႔္ကေတာ့ .ယြန္းယြန္းနဲ႔လည္းခ်စ္သူေတြျဖစ္ခဲ့တယ္လို႔လည္းသတင္းေတြ ထြက္ေ ပၚလာခဲ့ပါေသးတယ္။ မေန႔ကေတာ့ယြန္းယြန္းနဲ႔
စည္သူဝင္းတို႔ရဲ႕ ေနာက္ကြယ္ကဇာတ္လမ္းေတြထြက္ေပၚလာခဲ့ၿပီးေနာက္ေတာ့ အုပ္စိုးခန႔္က သူ႔ဘက္က စတင္ၿပီးေျပာ လာခဲ့ပါေသးတယ္။ Fans Myay Ni Lan ပရိသတ္ႀကီးလည္း အုပ္စိုးခန႔္အတြက္အားေပးစကားေလး ေရးေပးခဲ့ၾက ပါအုံးေနာ္..
Post Views: 249,783
ဆံပင်တုလေးနဲ့ ဘာဘီအရုပ်လေးတစ်ရုပ်လို ချစ်ဖို့ ကောင်းနေတဲ့ သမီးလေးရဲ့ ပုံတွေကို မျှဝေလာတဲ့ ခင်လွှမ်း
ပရိတ်သတ်တွေနဲ့ ကင်းကွာသွားတဲ့ အချိန်အတွင်းမှာ ဇရာထောင်းသွားတဲ့ အဆိုတော် လေးဖြူရဲ့ လက်ရှိပုံ ရိပ်လေးများ